एकलब्य प्रसाईं काठमाडौं, २२ असोज
तपाईंलाई लाग्दैन– राष्ट्रको विरुद्धमा काम गरिरहेको कुनै समुहले राष्ट्रियताको परिभाषा दिनु कत्तिको उचित हुन्छ ? राष्ट्रियताको अर्थ के हुन्छ ? सत्तामा रहेको समुहको विचार (वा काम)सँग असहमति जनाउँदैमा कसरी देशद्रोहीको संज्ञा पाईन्छ ? स्थापित मूल्य र मान्यतामाथि कसैले पनि आपत्ती जनाउँनै किन चाँहदैन् ? त्यहिँ जनतालाई देशद्रोहीको संज्ञा दिने सत्ता, उनीहरुकै भोट लिँदा देशद्रोही कसरी भएन ? कि जनता र जनताले हाल्ने भोटमा राष्ट्रियता र अराष्ट्रियताका फरक लेपनहरु लगाईएका छन् ?
भारतीय विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार आफ्नो संस्मरण ‘फ्रम बिहार टु तिहाड’मा यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु गर्छन् । बिहारबाट आफ्नो अध्ययनको शिलशिलामा जेएनयुसम्म पुगेका कन्हैयाले आफ्नो पुस्तकमा बाल्यकालका स्मृतिबाट वर्तमानमा प्रवेश गरेका छन् । यस्तो लाग्छ– यो संस्मरण होईन्, कुनै आख्यान हो । थोरै रोमाञ्चकता, थोरै राजनिती, थोरै समाज, थोरै आलोचनात्मक चेत र सँगै अलि बढि आफ्नै जीवनसँगको द्वन्द्व ।
कन्हैयाको बाल्यकालनै रोमाञ्चक छ । उनी आफ्नो जन्ममिती र नामलाई लिएर रहस्यको कथा सुसेल्छन् । कृष्ण जन्म अष्टिमीमा जन्मिएका उनका दाजुको नाम कृष्ण हुँदैन् । तर, जन्ममिति नै थाहा नभएका उनको नाम भने कृष्णकै अर्को नाम ‘कन्हैया’ राखिएको हुन्छ । पछि १५ वर्षमा मात्रै उनले आफ्नो जन्म दिन बारे थाहा पाउँछन् ।
संस्मरणमा उनले सुरुवातबाटै बिहारको सामाजिक संरचना र अर्थ राजनितीलाई उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो परिवारको राजनितीसँगको सम्बन्धदेखि धर्मको कुरा । मानिसको आर्थिक संरचनाले उसले बोक्ने राजनितिक विचारको जन्म हुन्छ भन्ने कुरा ।
गरिबीको अन्धकारबाट गुज्रिएका हुन्छन्, कन्हैया । गाउँको सरकारी स्कुलमा अंग्रेजीको पढाई हुँदैन् । तर, आफू प्रथम हुनेको अहमले उनलाई छोपेको हुन्छ । स्कुलबाट रिजल्ट सुनेर आउँदै गर्दा गाउँका कविले उनलाई सोध्छन्– उनन्सत्तरीमा कति हुन्छ? कन्हैया भन्छन्, ‘सात–नौ ।’ ती कविले फेरि सोध्छन्– ‘उनानअस्सिमा ?’ कन्हैयाको जवाफ हुन्छ–‘आठ र नौ ।’ तर, आफ्नो जवाफ गतल भएको सावित भएपछि उनको अहम् टुटछ ।
समाजमा गढेर रहेका असमानताहरु उनले नियालिरहेका हुन्छन् । तर, उनलाई त्यो असमानताको ज्ञान बाल्यकालमा त्यत्ति हुँदैन् । सरकारी स्कुलमा विना युर्निफम पढिरहेका हुन्छन् उनी । पछि प्राईभेट स्कुलमा पुगेपछि उनले आफ्नो स्तर थाहा पाउँछन् । परिवारमा कालो चिया खाएरु दुध किन्ने पैसाले उनलाई स्कुल पढाईएको हुन्छ । हिन्दीबाट एकास्सी अंग्रेजीको पढाई गर्नुपर्दा उनलाई अफठ्यारो हुन्छ । तर, पढाईसँगै उनलाई आफूले देखेका/भोगेका असमानताप्रति भने असन्तुष्टि जाग्छ ।
स्कुलमा प्रेम सम्बन्ध माथि लेखिएका गीत गाउनमा रोक हुँदैन् । तर, सँगै पढ्ने छात्र र छात्रा एकसाथ बस्नमा रोक हुन्छ । कन्हैयाले उक्त स्थानमा प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो मध्यम वर्गिय परिवार र पढेको सरकारी स्कुलमा भन्दा अहिलेको प्राईभेट स्कुलमा बढि परम्परावादी सोच भएका हरु छन् ।’
बाल्यकालबाटै रहस्यमा उनी हुर्किरहेका हुन्छन् । आफ्नो पहिचानलाई लिएर निकै सोच्छन् । धनि–गरिब, मुस्लिम–हिन्दु लगायतका विविधतालाई लिएर उनको आफ्नो धारणाको विकास भईरहेको हुन्छ । आफू हिन्दु भएको कुरा अर्को कक्षाको साथि मुस्लिम भएको थाहा पाएपछि मात्रै थाहा जान्दछन् ।
कक्षा दशमा हुँदा उनले पुस्तक पसलमा काम गर्न सुरु गर्छन् । परिवारमा आर्थिक संकट परिरहेको बेला आफ्नो लागि आफैं केही गर्छु भन्ने सोच उनमा हुन्छ । बेलाबेलामा पढाई छाडने सोच पनि आउँछ । तर, कक्षा दशको परिक्षाको रिजल्छपछि भने उनले पटना गएर पढ्ने निर्णय बनाउँछन् । पटनामा पनि आर्थिक संकट उत्तिकै हुन्छ । तर, विस्तारै उनीमा राजनितिक चेत र प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भईरहेको हुन्छ, जसले उनको जीवनलाई नै नयाँ मोडतिर धकेलिदिन्छ ।
चिया पसलदेखि पान पसलसम्मका ठाउँमा हुने राजनितिक गफमा उनको रुचि बढ्दै जान्छ । ईन्जिनियरिङ्गको तयारी गरिरहेका उनले त्यसप्रति बितृष्णा देखाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान तम्सिएका उनले विस्तारै सोच्न थाल्छन्– ‘के मेरो लािग दुवई नै सहि हो ?’ पत्रपत्रिकासँग परिचित हुँदै गएपछि उनले आफू पढदै अरुलाई पढाउँदै दैनिकी गुजार्छन् । सरकारी जागिरे हुने सपना देख्छन् । पटनाको पढाई सकेपछि दिल्ली गएर युपिएससीको परिक्षा दिने सोच बनाउँछन् ।
दिल्लीमा प्रवेश गरेपछि कन्हैयाको राजनितिक चेतको झन्झन् विकास हुन्छ । उनी राजनितिक चिन्तकदेखि अनिल रझिमवाले, कृष्ण झाा जस्ता लेखकहरुसँग संगत गर्न सुरु गर्छन् ।
दिल्लीमा रहँदा कमनवेल्थ खेलकुदका लागि वरिपरिको शरणार्थी बस्ती नदेखियोस भनेर सरकारले ठूल्ठूला होर्डिङ्ग बोर्डहरु टाँगेको हुन्छ । सो सन्दर्भमा कन्हैया लेख्छन्– ‘दिल्लीले आफ्नो असमानताको अनुहारलाई ठूला होर्डिङ्ग बोर्डहरुले छोपिरहेको छ । यस्तो लाग्छ सरकार असमानता, गरिबीप्रति चिन्तित छैन । चिन्तित छ त मात्र बाहिरी दुनियाँबाट यसलाई लुकाउनमा ।’
उनी सय वर्ष अगाडि सन् १९११ जर्ज भिले भारतको भ्रमणमा आउँदा भएको यस्तै घटनालाई सम्झन्छन् । शाही अदातलसम्मको उनको यात्रामा त्यो बेला पनि दिल्लीका शरणार्थी बस्तीहरुलाई ठूलाठूला पम्प्लेटहरु ढाँकिएको थियो । ईतिहास फेरि दोहोरिएकोमा आफ्नो चिन्ता व्यस्त गर्छन कन्हैया ।
त्यसै दौरान कन्हैया जेएनयुमा भर्ना हुन्छन् । लिखित परिक्षामा पास भएपछि उनको अगाडि दुई वटा बाटा हुन्छन्– रसियन शास्त्र र अफ्रिकन शास्त्र कन्हैया अफ्रिकन शास्त्र लिएर अध्ययन गर्न सुरु गर्छन् । तर, आफूलई रुचि भने रसियन शास्त्रतर्फ भएको पनि बताउँछन उनी ।
प्रश्नहरु गर्न नसक्नु मानिसको कमजोरी हो । कन्हैया यीनै प्रश्नहरुको खोजीमा बाल्यकालबाटै भौतारिरहेका हुन्छन् । जेएनयुमा भर्ना भएपछि उनको यात्रा यी प्रश्न पछाडिको राजनिति, हरेकले प्रश्न गर्न नसक्नुको कारण, र आम मान्छेको कथा बुझ्नमा हुन्छ ।
उनी लेख्छन्, ‘जेएनयुसँगको पहिलो जम्काभेट कसैले पनि कहिल्यै बिर्सन सक्दैन ।’
जेएनयुमा अन्तवार्तामा आएका छात्रछात्रालाई देखेर कन्हैयामा आश्चर्य जाग्छ । उनीहरुको पहिरन अलग हुन्छ । आफू सापटीमा लिएको बेल्ट र जुत्ता लगाएर गएका कन्हैया अरुले लगाएको सामान्यभन्दा सामान्य पोशाक देखेर अच्चमित हुन्छन् ।
काँधमा झोला, खुट्टामा चप्पल लगाएकाहरुलाई देखेर उनमा झन्झन् प्रश्नको भोक जाग्छ । अन्तवार्ता उनी झेलम नजिकै रहेको सुल्तेज होस्टलमा बस्न थाल्छन् । जेएनयुको यात्रासँगै उनको जीवनमा पनि नयाँ पत्रहरु खुल्न थाल्छन्, नयाँ कथाहरु लेखिन थाल्छन् ।
प्रदर्शनमा केटासँगै केटीको संख्या बराबर हुनु, डावामा खाना मात्रै नभएर राजनितिप्रतिको चेत र आलोचनात्मक विचार पाक्नु सामान्य हुन्छ जेएनयुमा ।
यी कुरासँगै घुल्दै घुल्दै गएका कन्हैया आफ्नो कक्षा कोठालाई कक्षा कोठाजस्तो मान्दैनन्, कन्फ्रेन्स रुम भन्छन् । जेएनयुमा पुगेपछिको अनुभवलाई उनी दैनिक नयाँ प्रश्न गर्न सिक्नु भन्छन् ।
उनी लेख्छन्–‘सामान्य मान्छेले ताजमहल देख्दा त्यसको सुन्दरता देखेर चकित हुन्छ, सन्दरताको बयान गर्छ । तर, जेएनयुमा आईसकेपछि उसले ताजमहललाई सुन्दरता भन्दा बढि आम मान्छेको पसिना र मिहेनतले खडा भएको एउटा विशाल संरचना देख्छ ।’
युपिएसिको परिक्षा नदिने निर्णय पछि कन्हैयाले आफू अधिकारकर्मि हुने निर्णय गर्छन् । विश्वविद्यालयमा रहेको विद्यार्थी संगठनसँगको संलगनतासँगै उृनी आफूपनि चुनावमा उठछन् ।
जेएनयुमा उनको जीत हुन्छ । विजयपछि भारतीय जनता पार्टीले चालेका कदमप्रति कन्हैया आफ्नो संगठनको साहयतामा प्रश्नहरु उठाउँछन् ।
विश्वविद्यालयमा भएका नियुक्तीसँगै नियन्त्रण गर्न खोजिएको प्रयास प्रति असहमति जनाउँछन् । जुन कारण उनी जेएनयु मात्रै नभएर भारतभर नै चर्चित युवा नेताको रुपमा चिनिदैं जान्छन् । उनको विचारले जेएनयुका रंगिन भित्तासँगै बाहिरी दुनियाँलाई पनि छुन थाल्छ ।
त्यो भन्दा बढि अफजल गुरुको बर्सिमा भएको कार्यक्रमले उनलाई चर्चा दिन्छ । मोदी सरकारको आँखाको तारो बनेका कन्हैयालाई फसाँईन्छ ।
सन २००१ मा भारतको संसद्मा भएको हमलाका मुख्य अपराधि भनिएका अफजल गुरुको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा लगाईएका नाराले कन्हैयालाई तिहाड जेलको अँध्यारो कठघरासम्म पुर्याउँछ । तिहाड जेलमा फाँसीको सजाय दिईएका गुरुलाई राखिएकै सेलमा कन्हैयालाई राखिन्छ ।
कार्यक्रममा लगाईएका नाराप्रति कन्हैया जानकार हुँदैनन् । तर, उनलाई जिम्मेवार भन्दै देशद्रोहको अभियोगमा मुद्दा चलाईन्छ । जेलमा पन्ध्र दिनसम्म राखिन्छ । अदालतमा जाँदा उनीमाथि हमला हुन्छ । जेलमा रहँदा जेलका कर्मचारीसँग उनको सम्बन्ध बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ । उनी आफ्ना भोगाईसँगै जेलका कर्मचारीको विचारलाई मन्थन गरिरहन्छन् ।
जमानतमा छुटेपछि कन्हैया जेएनयुको छात्रसंघको अध्यक्ष्ँ मात्रै रहँदैनन्, भारतभरिकै चर्चित विद्यार्थी नेता बन्छन् । सबैको छलफलको विषय उनै हुन्छन् । देशि र विदेशी संञ्चार उनी माथि केन्द्रित हुन्छ ।
कन्हैयालाई राष्ट्रबिरोधी भनिएकै कराण भारत भरिनै राष्टवादको परिभाषामाथि एकपटक छलफल हुन सुरु गर्छ । उनी पुस्तकको अन्त्यमा प्रश्नहरुको भेल छोडछन् । सत्ताले प्रश्न गर्नेहरुलाई किन थुन्छ भन्ने प्रश्न गर्छन् । फरक विचार राख्नेलाई राष्ट्रविरोधीको संज्ञा दिनुको पछाडि के राजनिति छ भन्दै सत्तालाई प्रश्न गर्छन् ।
समर्थकका लागि निकै चर्चित भएका कन्हैया सत्ताको लागि भने खलनायक भएको प्रष्ट देखिन्छ । उनले आफ्नो पुस्तकमा पनि यी कुरालाई उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो विचारले हरेक पटक मोदि सरकार विरुद्ध आवाज उठाईरहेका हुन्छन् उनी । विरोध गरिरहेका हुन्छन् उनी ।
आश्वासनको आडमा आम मान्छेलाई निराशाको पहाडमा थिच्नेहरुप्रति उनको असन्तुष्टी हुन्छ । उनले एक अन्तर्वातामा भनेका छन्– ‘जादिवादी एजेन्डालाई लिएर उनीहरु आफ्नो अनुहार लुकाएर बनावटी अनुहार देखाईरहेका छन् । हरेक मान्छेमाथि ब्राह्मणवाद थोपरिरहेका छन् ।
वैकल्पिक राजनितिको नयाँ उदयको रुपमा हेरिएका कन्हैयाले २०१९को भारतीय चुनावमा आफ्नो उमेदवारी दिए । उनीसँगै वेगुसरायबाट उठेका भारतीय जनता पार्टीका उमेदवार गिरिराज सिंहले चुनावमा विजय हाँसिल गरे ।
त्यो बेला कन्हैयाको कार्यलय रहेको ठाउँमा भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरुले जवरजस्ती पनि गरेका थिएँ । निकै सम्भावना बोकेका कन्हैयाले चुनाव हारेपनि मन भने थुप्रैको जिते । एकटिभीका पत्रकार रविश कुमारले उनको गाउँ पुगेर बनाएको भिडियोमा त्यो देख्न सकिन्छ ।
सत्तामा जो सुकै होस, उसले जनताको बारेमा सोच्नु कर्तव्य हुन्छ । भोट पाएर जितेकाहरुले भोटको सम्मान गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, कन्हैयाले भने जस्तै जसको भोट मान्य हुन्छ, उ मान्य हुँदैन् । जसको भोट राष्ट्रिय हुन्छ, उ राष्ट्रिय हुँदैन् ।
अराष्ट्रिय हुन्छ । ईतिहासमाथि प्रश्न गर्दा मुखमा चाबि लगाईन्छन्, जबसम्म सत्ता स्वास्र्थको निम्ति हुन्छ । जेएनयु, बिहार, जीवन र राजनितीसँगै आम मासिनमाथि सत्ताले गर्ने शासनलाई संग्रहित गरिएको कन्हैयाको संस्मरणले एक पटक सोच्न बाध्य बनाउँछ– कमजोरी हामीमा छ कि हामीले छानेर पठाएकोमा ?
ईतिहासको चेत नहुनुले हामीलाई प्रश्न गर्न दिईरहेको छैन कि के कारणले हामी प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनौं ? र सामान्य दैनिकी गुजार्न नसक्ने मान्छेबाट प्रश्नको अपेक्षा कसरी गर्न सक्छौं हामी ?
जब सत्तामा भएको मान्छेले नै चाहँदैन कि उप्रति कुनै प्रश्न आओस, तब कसरी प्रश्न उब्जिन्छन्? प्रश्न गर्ने पुस्तालाई देशद्रोशीको संज्ञा दिएपछि कसरी प्रश्नहरु जन्मिन्छन् ?
आखिर अहिलेको राजनितिक र सामाजिक अवस्थाले नै भोलीको पुस्ताको जन्म गराउँछ, भोलीको पुस्तासँग प्रश्नहरु जन्माउँछ ।
तर, खान र लाउनमा नै समस्या भईरहेको पुस्तासँग प्रश्नहरु हुँदैनन् । जब उ गाँस बाँस र कपास भन्दा माथि उठक सक्दैन, तब कसरी शासकको गल्तीमाथि प्रश्न उठछ ? कसरी शासक सत्तामा बसेर यीनै पूस्तासँग प्रश्नको खडेरी देखि रगत र पसिनाको कोकाकोला पिउँन छोड्छ ?
(प्रसाईं हाल दिल्ली युनिभर्सिटीमा दर्शनशास्त्रमा एमफिल गरिरहेका छन् ।)
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २२, २०७६, १३:०७:००